ज्युँदै छन् सङ्क्रमणका ‘क्याराभान’हरू – BRTNepal
ज्युँदै छन् सङ्क्रमणका ‘क्याराभान’हरू
पेशल आचार्य २०७५ कार्तिक २२ गते १०:४४ मा प्रकाशित
लगभग सबै कुराहरूले क्रमशः ‘हराभरा’ हुँदै जाँदा पनि देश पुनः राजनीतिक रूपका नयाँ नयाँ सङ्क्रमणका ‘क्याराभान’हरूमा प्रवेश गर्दै गएको देखेर यतिखेर आम जनतामा चरम निराशा फैलिएको पाइन्छ । नेपालले यही महिनाको सुरुमा विमस्टेक राष्ट्रहरूको चौथो शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक आयोजना ग¥यो । राजधानीका केही हिले सडकहरू तामझाम शैलीमा पिच गरियो, पर्खालहरूमा पालिस पोतियो । जसै विमस्टेक सम्मेलन सकिएर पाहुनाहरू आआफ्ना देश फर्किए –यता फेरि ढल फुटेर सडकहरू जलाम्मे भए । अलिक दिन सफा भएको राजधानी फेरि उस्तै भयो । यसले हिन्दी मुहावरा ‘चार दिनकी चाँदनी फिर अँधेरी रात’ लाई सम्झायो ।
कार्टूनिष्टहरूले कटाक्ष गरेर कार्टुन कोरे । कतिपयले सो बेला टिप्पणी गरेथे –‘पाहुनाहरू आउँदा कोठाभित्र भएको फोहोर कार्पेट मुनि राख्ने नेपालीहरूको पुरानै परम्परा हो । लगभग यस पटक पनि त्यसै ग¥यो सरकारले ।’ तीन कुनेमा कलात्मक पर्खाल बनाइएको, सडकहरूलाई रेजर लगाएर सफा चट गरिएको अनि लिपपोत गरेर देखावा कै लागि भए पनि चिटिक्क पारेको । यति गर्दागर्दै समेत आयोजक राष्ट्रका नाताले सरकारले गोकर्णमा आगन्तुक अतिथिहरूलाई दिइने भनिएको ‘रिट्रिट’ जोरपाटी–गोकर्ण’ सडकको बेहालका कारण सोल्टी होटेलमा दिन बाध्य हुनु प¥यो ।
नेपालले विमस्टेक बाट के पायो वा भविष्यमा के पाउने छ, त्यो अहिलेलाई बहस र चर्चाको विषय हुँदै होइन । मात्र के भने भारतले यस पटक विमस्टेक मञ्चका नाममा पाकिस्तान र चीनलाई नजानिँदो रूपमा पाखा लगाएर आफ्नो सर्दो गर्ने काम भने पक्कै गरेको छ । सार्क लगभग राजनीतिक रूपमा प्यारालाइसिस भएझैँ अवस्थामा रहेका बेला सोको ‘काउन्टर प्ले’ गर्नका लागि भारत कम्मर कसेरै विमस्टेकमा लाग्या हो । ऊ यो वा त्यो चाल चलेरै पनि चीन र पाकिस्तानलाई आफ्ना छिमेकी देशहरूसँग नजिकिएको हेर्न चाहँदैन । यसमा उसको ‘दमित मनोविज्ञान’ समेतले काम गरेको छ । तर परिस्थिति भने उसको सिकन्जाबाट शनैःशनैः फुत्किरहेको भान हुँदै छ ।
प्रसिद्ध अर्थशास्त्री तथा पूर्व परराष्ट्र मन्त्री डा. भेषबहादुर थापाले सटिक शैलीमा मूल्याङ्कन गर्दै भनेका छन् –‘भारत सार्कबाट पछि हट्ने पूर्व सङ्केत नै उसले विमस्टेकमा क्रियाशीलता बढाउनु हो ।’ अचम्मको कुरा त के छ भने चौथो सम्मेलन हुँदाताकासम्म विमस्टेकको बडापत्र समेत लेखिएको छैन । भारत र पाकिस्तानका बिच भएको भनिएको मन मुटावका कारण आज जसरी सार्कलाई प्यारालाइसिसको रोगीझैँ बनाइएको छ भोलि विमस्टेकमा रहेका सदस्य राष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई लिएर भारतले फेरि यहाँ पनि कच्चा कूटनीति नथाल्ला भन्ने कुनै दह्रो जवाफ छैन ।
बहादुरीसाथ सरकारले ६ महिनाको कार्यकाल पूरा गरेको छ । यस बिचमा पहिलो पल्ट मुलुकमा सङ्घीयता कार्यान्वयन भएको छ । पुरानो मुलुकी संहितालाई परिवर्तन गरेर नयाँ देवानी र फौजदारी संहिता ल्याइएको छ । खास गरी प्रेस र चिकित्सा क्षेत्रमा यो संहिताका केही बुँदाहरूलाई लिएर व्यापक विरोध भएपछि सरकार त्यसमा फेरबदल गर्ने गृहकार्यमा जुटेको समेत बताइएको छ । डाक्टरहरू अझै ‘दिल खुस’ बनाएर आफ्ना चिकित्सा कार्यमा फर्केका छैनन् । तिनीहरूले केही दिनका लागि मात्र आन्दोलन रोकेका छन् । फिर्ता लिएका छैनन् । सरकार गठन हुँदाताका जसरी यातायात सिन्डिकेट अन्त्यका लागि विभागीय मन्त्री रघुवीर महासेठ तातेका थिए पछि एकाएक उनी आफ्नो कार्यशैलीबाट एक्कासि पछि हटे ।
यतिखेर सरकार जति बोल्दै छ उति ऊ कार्यरूपमा चिप्लिँदै गएको भान भएको छ । कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कार पछि हत्या भएको मुद्दामा प्रहरीको अनुसन्धान र सरकारी रवैया देख्दा लाग्छ –देशमा सरकार नामको कुनै संयन्त्रको उपस्थिति नै छैन । नेता, पुलिस र प्रशासनका मानिसहरूको अप्रिय ‘नेक्सस’ले सामाजिक न्याय र जनताको बाँच्न पाउने हकलाई पुरै तुहाई दिएको छ । कञ्चनपुरका नागरिक अगुवाहरूले त्यहाँ तीज छेक कालो लुगामा सडकमा उत्रिएर विरोध गर्दै ‘कालो तीज’ मनाए । पुरै देश तात्दा पनि सरकार अहिलेसम्म कानमा तेल हालेर बसेको छ । नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले आफू सम्मिलित सरकारलाई सो हत्याका अपराधी छिटो पत्ता लगाई सार्वजनिक गरोस् भन्नु त परै जाओस् सार्वजनिक समारोहमै पीडित पक्षलाईसमेत झन् पिडा हुने गरी ‘सरकारलाई असफल गराउनका लागि नै हत्या र बलात्कारका मुद्दाहरू उठाइएको’ समेत भन्न भ्याए । यो मुलुकमा अहिले प्रतिदिन ३ देखि ४ वटा बलात्कार र हत्याका मुद्दाहरू उठिरहेका र तिनका अपराधीलाई कानुनको कठघरामा ल्याउनु त कहाँ हो कहाँ गुलियो भाषा बोल्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘यो ६ महिनामा सरकारले शान्ति सुरक्षाको सुप्रबन्धमा अभूतपूर्व सफलता प्राप्त गरेको’ दाबी गर्छन् ।
सर्वोच्च अदालतमा ओमप्रकाश मिश्र नयाँ प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्त भएर कार्य प्रारम्भ गरिसके । उता संसदीय सुनुवाइ समितिबाट बहुमतले अस्वीकृत प्रधान न्यायाधीश दीपकप्रसाद जोशी एक महिना लामो बिदापश्चात् फेरि अदालत हाजिर हुन गए । उनले न त नैतिकता देखाउँदै राजीनामा दिए । न त संसदीय सुनुवाइ समितिको निर्णयलाई संवैधानिक चुनौती नै ! फेरि लुसुक्क सर्वोच्चमा उनको हाजिरीले न्यायालयलाई ‘पावर’ खेलाउनेहरूले आफ्नो खेल खोर बनाउन लागेको आशङ्का यतिखेर न्यायवृत्तमा गरिँदै छ । सुनिन्छ, ‘मिश्र आउँदो पुसमा उमेर हदका कारण अवकाश हुँदा फेरि सिनियरका नाताले आफू सो पदको दाबी गर्नैका लागि जोशी पुनः अदालत हाजिर भएका हुन् । ‘‘काउन्टर प्ले’ गर्नका लागि बहुमतको संसद् उनलाई महाभियोग लगाउने मानसिकतामा रहेको’ समेत कुरा बाहिर आउन थालेका छन् ।
नियतिले मुलुकको जेठो राजनीतिक पार्टी नेपाली काँग्रेसलाई निम्छरो प्रतिपक्षका रूपमा वर्तमानको ‘फड्के साक्षी’ बस्न बनाएको अवस्था छ । उसले सरकारका राम्रा र नराम्रा कामलाई गुणदोषका आधारमा समर्थन र विरोध गर्ने सुविधा हुँदाहुँदै पनि क्लान्त र मलिन झैँ लाग्दै छ । जनतामा बढेको चेतना स्तरका कारण अहिले सदनमा भन्दा सडकमा मुद्दाहरू जनता आफैँ वकालत गरिरहेका छन् । यस्तो परिदृश्यले गणतन्त्र बलियो त हुन्छ नै तर केही लामै समय लाग्छ ।
नेपाल वायुसेवा निगमले हालै खरिद गरेको वाइड बडी विमान सम्बन्धमा उजुरी परी पेस भएका कागजातहरू सबै लेखा समितिले झिकाउने निर्णय गरेको छ । सरकारबाटै बर्खास्तगीमा परेका ‘चतुर खेलाडी’ दिगम्बर झा फेरि सरकारलाई ‘खुस’ बनाउँदै दूर सञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा पुनर्नियुक्ति लिई काम गर्न थालिसके । यस्तै यस्तै घटनाहरू पुनरावृत्त हुँदै गए भने कुनै दिन फेरि अख्तियार प्रमुखबाट गल हत्याइएका लोकमान सिंह कार्की र सर्वोच्च अदालतबाट निकालावास गरिएका गोपाल पराजुलीजस्ता व्यक्तिलाई सरकारबाटै सम्मानपूर्वक नियुक्ति दिई काम गर्न नलगाइएला भन्न सकिन्नँ ।
नेपाली जनताले यतिखेर करका बारेमा साह्रै ठुलो गुनासो सरकारसँग गरेका छन् । तर सरकार समृद्धि र विकासका लागि करलाई ‘सुपर ग्लु’ लगाएर जोड्न खोजिरहेको छ । मुलुकभरिका शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी, विद्युत् र जनजीविकाका क्षेत्रहरू लगभग तहसनहस अवस्थामा छन् । मुलुकको सबैभन्दा जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालय र सो मातहतका निकायहरू निस्तेज अवस्थामा छन् । सीपयुक्त, इमानदार र स्वाभिमानी व्यक्तित्वहरूका सट्टामा क्रमशः पार्टी निकट र सम्बन्धित क्षेत्रका सामान्य ज्ञान पनि नभएका मानिसहरूको हर क्षेत्रमा प्रवेश पाई हालिमुहाली हुँदै जानु, नागरिक अगुवाहरूको वाणी निस्तेज बनाइनु, भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको स्थिति नहुनु, राजनीतिको अपराधी करण र अपराधको राजनीतिकरण हुनु, प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरूले आफूहरूलाई सिडियो जति पनि अधिकार नदिइएको बताइनु, सरकारमा सामेल भएकै पार्टीले द्वैधचरित्र अँगाल्दै संविधान दिवसमा संविधानकै विरोध गर्नका लागि जिम्मेवार मन्त्रीलाई नै खटाइनु र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा समेत प्रकारान्तरले सरकार अकर्मण्य हुँदै जानुले सङ्घीय गणतान्त्रिक नेपालको अवस्था कतै ‘युरोपको दुःखका रूपमा चित्रित राष्ट्र’ टर्कीको ‘प्रजातान्त्तिक अभ्यास’ झैँ त हुँदै छैन भन्नेजस्ता प्रश्नहरू यतिखेर चारैतिरबाट ह्वारररर्अ उठ्ने गरेका छन् । जसको समिचीन र वस्तुगत उत्तर सरकारले समयमै दिनु उसको र देशको राजनीतिक स्थायित्वका लागि समेत अपरिहार्य देखिएको छ । किनकि प्रश्नहरू आवरणमा मात्र प्रश्न हुन् गुदीमा ती तत्तत् क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै न कुनै सङ्क्रमण नै हुन् । विश्व, दक्षिण एसिया र नेपालको विगतलाई मिहीनशैलीले विश्लेषण गरेर हेरेका खण्डमा सो कुरा सर्वाधिक रूपमा पाइएको पनि छ ।